Maqaallada ka agdhow
Marabtaa inaad U Safarto UK ?? U Adeegso Gaadiidkaan Boqortooyada Ingiriiska !!
Waxaa laga yaabaa 20, 2020 Karuna Chandna soo qaado, UK
Gadiidka Wadooyinka Boqortooyada Midowday (UK) iyo jidadka waawayn waa waddooyinka ugu muhiimsan ee gaadiidka gudaha Ingiriiska. Waxaa jira ilaa 225,000 mayl (362,000 km) oo wadooyin ah gudaha Ingiriiska. Ku safridda baabuur, bas ama taksi ayaa ah tan ugu badan ee gaadiidka, xisaabinta